Kheyre oo Warqad culeys ku ah Farmaajo u diray Ra'iisul Wasaaraha Cusub - Awdinle Online
Kheyre oo Warqad culeys ku ah Farmaajo u diray Ra’iisul Wasaaraha Cusub
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal 24-kii Bishaan waxaa uu u diray Ra’iisul Wasaaraha Cusub, kass oo la ogeeysiiyay Madaxweyne farmaajo, Guddoonka labada Aqal, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Hanti dhowraha Qaranka.
Qoraalka ayaa ku saabsan in Xasan Cali Kheyre uu doonaya in si sharci ah uu xilka ugu wareejoyo Ra’iisul Wasaaraha Cusub, isla markaana uu warbixin ka siiyo xaalada Guud ee dalka caqabadaha jira iyo sida looga gudbi karo.
Qoraalkaan uu Kheyre u diray Ra’iisul Wasaaraha Cusub ayaa waxaa ay halis sharci iyo mid siyaasadeed ku tahay Madaxweyne Farmaajo oo markii hore sifo aan sharci aheyn kusime uga dhigay Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya.
Hayeeshee hadii la aqbalo codsiga Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa waxba kama jiraan noqon doona heshiisyo iyo weerar ay ansixiyeen Golaha Wasiirada xilka siihaya sida, Guddiyada adeega Garsoorka, Batroolka iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo kuwo kale.
Previous articleTaliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Baydhabo
Next articleGuddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka walaacsan soo noqoshada Xildhibaan…..